PressReader - Isolezwe: 2018-11-08 - Bahlaba iGautrain ngokuvimba iciko lebheshu
Bahlaba iGautrain ngokuvimba iciko lebheshu
Isolezwe - 2018-11-08 - IZINDABA - BONISWA MOHALE
SIGXEKWA nxazonke isenzo seGautrain sokuvimbela iciko eliyisishoshovu samaciko, uThando Mahlangu ukuba ligibele lesi sitimela ligqoke ibheshu.
Isolezwe lithole ukuthi uMahlangu wayegibela iGautrain esuka ePark Station eGoli eya eHatfield ePitoli kodwa wanqatshelwa ukuthi agibele kwiGautrain ngoba kuthiwa indlela agqoke ngayo ayamukelekile.
Ekhuluma nelinye iphephandaba uMahlangu uveze ukuthi uze waphoqeleka ukuba ayogibela itekisi futhi ufuna abaphathi beGautrain bamnxephezele ngemali ayezoyenza ePitoli ngalolo suku njengoba agcina engafikanga ngesikhathi lapho ayeya khona.
Isikhulu esiphezulu seNational Heritage Council, u-Adv Sonwabile Mancotywa, sithe akwamukelekile ukuthi kube nomuntu ovinjelwa ukuhamba ngeGautrain ngoba evunule kwazise eNingizimu Afrika kunezinhlanga ezehlukene.
“INingizimu Afrika yizwe elibuswa ngentando yabantu lapho samukelana futhi sihloniphana ngokuhlukana kwamasiko ethu. Kuyishwa ukuthi kunabantu abangakwazi ukwamukela imvunulo yabanye abantu. Sihlale sigqugquzelwa ngosuku lwamaGugu, uSepthemba 24, ukuba sivunule. Siphoxekile ngesenzo seGautrain sokuvimba uMahlangu,” kusho u-Adv Mancotywa.
Uthe bayabathanda abantu abafana noMahlangu abazigqajayo ngesintu nangemvelaphi yabo futhi bazokwenza konke okusemandleni ukubavikela.
UNgizwe Mchunu oyinxusa lamasiko, oke wavinjwa ukuthi agibele ibhanoyi ngoba evunule, naye usigxekile isenzo sabeGautrain.
“Bayamdelela uMahlangu, kungani bemvimbele ukuthi agibele iGautrain. Ngizobhala incwadi ngokuhlanganyela namakhosi ngoba kufanele siwavikele amasiko nesintu sethu. Akwamukelekile ukuthi sivinjelwe ukugibela amabhanoyi neGautrain uma sivunule. Iyangicika le nto futhi ngizokwenza isiqiniseko sokuthi lolu daba alupheleli emoyeni njengoba ngenza ngesikhathi bengivimba ukuthi ngigibele ibhanoyi,” kusho uNgizwe.
Ugqugquzele abamnyama ukuthi babumbane bavikele isintu namasiko abo ngoba akekho umlungu ozobavikela.
“Singamane sife kunokuthi sithule kuhlukunyezwa abantu bakithi uma bevunule. Ngeke siphilele ukudla kuphela kodwa kufanele sivikelane sisodwa ukuze kuhlonishwe amasiko nesintu sethu,” kusho uNgizwe.
Imizamo yokuthola ukuphawula kwabeGautrain ayiphumelelanga njengoba kushaye isikhathi sokushicilela bengayiphendulanga imibuzo abathunyelelwe yona yiSolezwe.